Sonke, okungenani kanye empilweni yethu, sabamba izikhali zangempela noma zokudlala. Ngempela, izingane eziningi zidlala empini, izinsizwa eziningi zikhonza empini, futhi abamele abesilisa abashadile, cishe babe nethuba lokuzijwayeza isibhamu noma ukuqhuma kukaKalashnikov ezikoleni zesikole se-CWP. Kodwa-ke, abanye abantu bakhetha ukugcina izikhali zangempela endlini: ukuzingela noma ukuqinisekisa ukuphepha kwabo. Kuthiwani uma sibona isibhamu ephusheni? Ingabe kufanele silungiselele ingozi engenzeka, noma ingabe kukhona enye incazelo? Ukuze uthole impendulo yombuzo othi "isibhamu siyaphupha ngani" siphakamisa ukuthi sisebenzise ngokushesha ezincwadini eziningi zokuphupha.
Ukuhumusha kukaGustav Miller: isibhamu ephusheni
Ngokusho kwencazelo yale ncwadi yokuphupha, uphawu olunjalo luphawu olungenamusa. Uma ngabe isikhali sakho sihileleke kulephupho, khona-ke ubungozi bokuwela ekubanjweni kwemizwa ephansi okuzolawula izenzo zakho ezengeziwe. Ukuzwa ingxoxo mayelana nomvukeli womuntu - ithuba lokukwazi kusengaphambili mayelana nezinhlelo ezikhohlisayo zezitha zakho futhi uthathe izinyathelo ezifanele. Phonsa ibhasiksi ngephupho - esimweni lapho uqala ukugodlela khona umuntu ongeyena ongathintanga. Futhi lo mzwelo uzokuhlupha futhi ikuenze wenze izenzo ezimbi kakhulu.
Isibhamu siyaphupha ngani: Iphupho likaFreud
Izikhali ezinjalo, ezibonakala ephusheni lakho, zingabonakalisa ukuthi empeleni uvame ukuphoqelela umlingani ukuba alale naye. Akudingeki ukuthi, akanelisekile ngalesi simo, futhi naphezu kwemizwa efudumele ngawe, kungenzeka ukuthi uyokwenza ukuphazamisa ubuhlobo bakho. Uma uphupha ukuthi udutshulwa ngesibhamu, mhlawumbe esikhathini esizayo esiseduze kuzodingeka ukuthi uthathe izinyathelo ezisebenzayo ukuze ulondoloze inyunyana nabathandekayo. Futhi noma ngabe awukwazi ukubizwa ngokuthi umuntu ozimisele, kuzomele uzame ukwenza okungeke kwenzeke, ukuze othandekayo angapheli amandla ngokuzikhethela kwakhe.
Iphupho Elihle: isibhamu ngephupho
Ukuphendula umbuzo othi "isibhamu kufanele siphuphe ngani", abaqoqi beliqoqo lokuhumusha bathi lesi simpawu sibonakalisa intukuthelo noma ukungathandi ukuthi uzizwa komuntu. Akukakushiywa ukuthi lo mzwa awunawo okukholisayo. Ngakho zama ukuhlola isimo ngokucophelela, futhi ungazishiyi ize. Shoot revolver ephusheni - ukuxazulula ngempumelelo inkinga enzima.
Incwadi yesimanje yephupho: uma iphupho lesibhamu
Abalobi baleqoqo yokuhumusha ezimweni eziningi bacabangela lolu hlobo lwezikhali njengophawu lokuhluleka. Ngakho-ke, uma uphupha ukuthi unesikhwama sakho siqu, esikhathini esizayo umlingisi wakho ungadala, futhi imicabango yakho ilawulwa ngobuqili nokuhlakanipha. Lalela indaba yezikhali zomunye umuntu - ukuthuthukisa ukudalulwa kwezinhlelo zezitha zakho nezitha zakho ezibhekiswe kuwe. Iphupho lapho udubula khona i-revolver, libikezela ukuthi esikhathini esizayo uzochitha amandla amaningi ekuphindiseleleni ngenxa yobubi obusolwa.
Iyini iphupho lesibhamu: Ibhuku lephupho kusuka ku-A kuya ku-Z
Abahlanganisi bale qoqo babukela futhi i-revolver njengento embi. Uma uphupha ngesibhamu esandleni somthandekayo wakho, lapho ufuna ukukubulala khona, noma ukudubula ngokwakhe, khona-ke ingxabano enkulu kakhulu ilindele wena, ekugcineni kungabangela ukuhlukana kokugcina ebuhlotsheni. Ukuze ubone iColt kufanele iqhaza ebhizinisini elizohluleka ukwenza ngamabomu; Mauser - ukuthola inzuzo nokuchuma; Browning - kuya ochungechungeni lwezilingo, okuyinto, noma kunjalo, ezophela ngemicimbi ejabulisayo; UWalter - ukuya enkundleni yothando; Nagan - ukuphinga. I-pistol yamandulo yamagatsha isithembisa iphupho elikhulu noma ngisho nokufa okungaqondakali. Isibhamu esibucayi sibikezela ukungaqondi kahle kakhulu. Uma uphupha nge-duel ngesibhamu, ngabe usengozini yokuba yisisulu sokuphanga noma ukukhohliswa. Kungani uphupha ngesibhamu ngegama lokubhalisa? Umbono onjalo uyaxwayisa ukuthi uhilelekile ekuxabaneni okungenzeka kugwenywe. Bulala indoda e-revolver - ekuxabaneni komndeni. Ukulayisha isibhamu - ezindabeni ezibi, ukuxuba noma ukuqoqa - engozini yokusongelwa ngokujulile, ukuhlanzwa nokugcoba - ukukhungatheka nokucindezeleka okubangelwa izingane. Uma uphupha ukuthi udlala i-roulette yaseRussia, khona-ke empilweni yangempela uzothola injabulo enkulu ekukhulumisaneni nasekuzijabuliseni ngezokugembula, abantu abanobungozi nabangcolile. Iphupho lapho udonsa khona, kodwa lokhu kwenzeka, kuxwayisa ukuthi kufanele ushintshe ingqondo yakho ngomuntu ongajwayelekile.
Incwadi yasendulo ye-dream dream: ibhuloho
Uma wezwa isibhamu ephusheni, khona-ke esikhathini esizayo esiseduze unenkinga. Umbono lapho insizwa ephupha khona ukuthi iqhuma isibhamu sithembisa umshado ophuthumayo nentombazane esheshayo kodwa ekhuthele kodwa ekhuthele futhi enhle, inhlangano yomshado iyojabula kakhulu.
Kungani utshani obuluhlaza edilini buphupha?
Kungani lezi zimbongolo zigijimela ukulala? Ibhuku lephupho lizokutshela
Hlanganisa izinwele zakho ephusheni. Ukuchazwa kwamaphupho
Kanjani ukwandisa inani ubisi lwebele
"Pannonia" - isithuthuthu sokukhiqiza isiHungary esiphakathi nekhulu lokugcina
"Metformin" izidakamizwa. Izibuyekezo. abstract